वर्ल्ड लिंकको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत अन्यको कति ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
शनिवार, माघ २२ २०७८
नेपालमा १८ लाख ८८ हजार ३६४ ग्राहकहरूले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका इन्टरनेटहरू जडान गरेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ साल मंसिर महिनाको एमआइसएस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा ५३ वटा कम्पनीले ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ ।
यहाँ हामीले सबैभन्दा बढी ग्राहक भएका १० कम्पनीहरूको सूची तयार पारेका छौँ । यो सूचीको अग्रस्थानमा वर्ल्ड लिंक रहेको छ । यस कम्पनीको बजार हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । वर्ल्डलिंक एक्लैको ग्राहक सङ्ख्या अन्य तीन नीजि कम्पनीहरू सुविसु केबलनेट, क्लासिक टेक र भायानेटको एकमुष्ट जोड्दा भन्दा बढी देखिएका छन् ।
. १ वर्षमा कुन कम्पनीले कति ग्राहक बनाए ?
. बजार विस्तारमा सिजि नेट अगाडि ६ महिनामा ९ हजार ग्राहक
. प्राविधिक क्षेत्रमा महिलाहरू बढ्दै, कुन कम्पनीलाई कति कर्मचारीले धानेका छन्
. वर्ल्ड लिंकका झन्डै ५ लाख ग्राहक, कुन कम्पनीका कति ?
वर्ल्ड लिंकले नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरी ५ लाख ६२ हजार ७७० ग्राहक बनाएको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल टेलिकमका ३ लाख ९ हजार ४५५ ग्राहक छन् । नेपाल टेलिकमले १६ दशमलव ३९ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । यो सूचीमा मोबाइलबाट इन्टरनेट सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या समावेश गरिएको छैन । केवल, वायरलेस र फाइवर इन्टरनेट जडान गर्नेहरूको सङ्ख्यामा मात्र यो सूचीमा समावेश गरिएको हो ।
बजार विस्तारमा सिजि नेट अगाडि ६ महिनामा ९ हजार ग्राहक
चौधरी ग्रुपको सिजि नेटलेले सेवा सञ्चालन गरेको ६ महिनामै झण्डै नौं...
तेस्रो नम्बरमा रहेको सुविसु केबल नेटका २ लाख ४७ हजार ९३८ ग्राहक छन् भने चौथो नम्बरमा रहेको क्लासिक टेकको १ लाख ९५ हजार ३८८ ग्राहक छन् । कूल इन्टरनेट जडान गर्नेहरूमा सुविसुका १३ दशमलव १३ र क्लासिक टेकका १० दशमलव ३५ प्रतिशत ग्राहक छन् ।
भायानेट ८ दशमलव ४० प्रतिशत ग्राहकका साथ सूचीको पाँचौ स्थानमा रहँदा वेव सफर ३ दशमलव ९२ प्रतिशत ग्राहकका साथ छैटौँ स्थानमा रहेको छ । सङ्ख्याका हिसावले भायानेटमा १ लाख ५८ हजार ६५० ग्राहक छन् भने वेव सफरमा ७४ हजार ४२ ग्राहक छन् ।
चितवनबाट सञ्चालनमा आएको टेकमाइण्ड्स ६९ हजार ९१३ ग्राहकका साथ सातौँ नम्बरमा रहेको छ । सूचीको आठौँ नम्बरमा ४६ हजार २१८ ग्राहक भएको ब्रोडलिंक रहेको छ ।
शीर्ष १० स्थानमध्ये अन्तिममा विराटनगरबाट सञ्चालनमा आएको कनेक्ट नेपाल नेटवर्क रहेको छ । यसका १८ हजार ५७० ग्राहक छन् । विगत केही महिनादेखि यसका ग्राहक सङ्ख्या बढेका छैनन् । सूचीको नबौँ स्थानमा रहेको डिस मिडिया नेटवर्कका ४४ हजार २८७ ग्राहक छन् । २०७८ असारदेखि यता डिस मिडिया नेटवर्कका ग्राहक सङ्ख्यामा उल्लेख वृद्धि भएको पाइएको छ ।
नेपालमा दुरसंचार/ इन्टरनेट जस्ता सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको प्राविधक क्षेत्रमा महिलाहरूको...
शनिवार, माघ ८ २०७८
माओवादी केन्द्रले जितेका १२० पालिकामध्ये ८८ प्रतिशत गाउँपालिका